Ndezvipi Zviyeuchidzo Zvekuunza Kubva KuRwendo? | Save A Train
musha > Travel Tips > Ndezvipi Zviyeuchidzo Zvekuunza Kubva KuRwendo?
Chitima Kufamba China, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Russia, Chitima Kufamba Switzerland, Chitima Kufamba UK, Travel Europe, Travel Tips
Unogona here kurangarira rwendo rwese iwe rwawakambotora, maonero aunoyemura, nezvikafu zvawakaravira? Pamwe kwete, uye ndosaka zviyeuchidzo iri iyo nzira kwayo yekuita kuti ndangariro dzive dzeupenyu hwese. Ndezvipi zviyeuchidzo zvekuunza kubva parwendo? Heano akanakisa echirangaridzo mazano ekuunza chimedu cheparadhiso kumba.
Zviyeuchidzo Kuti Uuye Kubva Kubva Rwendo: Kubika Ingredients
Zvinonhuwira, muto, herbs, ichakutora iwe udzokere kumashure kunonaka, munhuwi, uye nguva dzenzvimbo iyoyo inokosha. Zvinoratidzwa kuti tinorangarira zvakanyanya kuburikidza nepfungwa dzedu, uye chikafu ndiyo nzira yakanakisa yekusangana nenzvimbo. Uyezve, izvo zvekubika zvinoita kuti shamwari dzako nemhuri vafunge kuti vanga varipo newe.
Chinese mahebhu, pasta muto, uye kunyange pasita zviyeuchidzo zvakanaka zvekudzosa kubva parwendo kuenda kuChina, kana Italy, semuyenzaniso. saka, rangarira kurongedza bhegi yekuwedzera chete kune vefoodies, sezvo zvirinani kurongedza izvi zvinonaka zviyeuchidzo zvakasiyana. Iwe haushu kuda kuvhura sutukezi kuti uone hembe dzako dzakatsvuka paprika shades.
Kutsigira tsika yemuno uye maartist ari kuratidza iwe uri anofunga uye akangwara mufambi. Ruoko-rwakapendwa sosi mbiya, machira etafura rakarukwa, kana akapfekedzwa machira mashati zviyeuchidzo zvinonakidza izvo shamwari dzako zvichakoshesa, shandisa, uye nzira huru yekuratidza kutenda kwako kunharaunda yakakugamuchira.
Yemunharaunda hunyanzvi chiyeuchidzo chakanaka chekudzosa kubva kune chero rwendo muEurope neChina. MuChina, unogona kuwana mwenje tsvuku yemhanza yakanaka, kubva kuRussia a dzakagadzirwa nemaoko Domovichok izvo zvinochengetedza imba yako kana girazi rinotonhorera redoro kubva kuPrague kune babamunini vanoda mukoma kana hama. Ndeipi denderedzwa hombe ye eco ushamwari kufamba, kugamuchira, uye nekuparadzira hunhu hwakanakisa pasirese.
Imba Yekushongedza Zviyeuchidzo
Ita kuti rwendo rwako ruve chikamu cheimba yako, ine ruva rakanaka Delft vase kana matanda tulip kubva kuNetherlands. Dzimba dzekushongedza zviyeuchidzo zvinogona kugadzirwa nemaoko, uye kazhinji vanotaura nyaya dzetsika nenhoroondo yekwavakabva.
Ndiro ye ceramic pamadziro, bohemian crystal kubva kuCzech Republic, kana cuckoo wachi kubva ku Black Forest miyeuchidzo yakanaka yekuunza kumba kubva parwendo rwako kuenda kuEurope.
Rimini kuFlorence Nechitima
Roma kuFlorence Nechitima
Pisa kuFlorence Nechitima
Venice kuFlorence Nechitima
Chirangaridzo Kuunza Kubva Rwendo: Doro Remunharaunda
Kugovera nyaya kubva parwendo pamusoro pegirazi redoro rakanaka kunobatsira kuyeuchidza pane zvese zvine muto, uye nguva dzinonakidza. Kuunza doro remunharaunda chiyeuchidzo chinozivikanwa kuunza kubva kuEurope, kunyanya kana iri chinwiwa chinwiwa chose chinofanira kuyedza pasirese.
saka, Limoncello anobva kuItari, kana Riesling waini kubva kuRhein mupata kuGerman, kana nzira, ivo vanogamuchira vanofara nekugamuchira chipo chakadai. Kana iwe usina chokwadi kuti chii chinwiwa chemuno, teerera magirazi ari patafura yevagari vemo panguva yekudya kwemanheru kana kubvunza mubhawa remuno.
Zvishongo nezvishongo inzira inoshamisa yekutakura nzendo dzako padyo nemoyo. Mutsipa unopenga, amber mhete kubva kuPoland, kana chishongo chesirivha chinokwezva, zvidimbu zvisingatombobuda musitaera, uyezve, hazvina nguva.
saka, kana iwe uchida kuunza zvisingawanzo zviyeuchidzo, ipapo zvishongo zvakakwana. Kuwedzera runako kubhandi rako kubva kumatunhu ese kushanya kunoshamisa. zvisinei, pakutenga zvishongo kune imwe nyika, chenjera pakubata mari uye usadonhera mune chero chipi zvacho iyo inozivikanwa yekufamba chitsotsi pasirese.
Kanganwa makiyi makuru uye maposikadhi, kana shamwari dzako dziri vateresi, hapana chinoti Ini ndine hanya kupfuura chidimbu chakasarudzika chavanogona kuwedzera kuunganidzwa wavo. Wese munhu anotora chimwe chinhu: mukombe wedoro wakashongedzwa kubva kuPrague, Murano girazi chivezwa, Russian Babushka kune zvidhori zvidhori, uye iyi ingori mienzaniso mishoma.
Uyezve, magirazi ekupfura, ngowani, uye pini ndeimwe inotyisa yekuunganidza chiyeuchidzo chekudzosa kubva parwendo kuenda kuEurope. Yakarembera pamadziro, inoshandiswa mumapato, kana kuchengetwa muarubhamu, shamwari dzako dzinokoshesa nguva yawakapedza uchitsvaga icho chidimbu chakakosha uye nyaya iripashure payo.
Zvinotapira uye zvinonakidza kubata kunoisa kunyemwerera uye kubata vateereri kutarisisa. Chikafu ndiyo nzira yakanakisa yekusangana nenzvimbo, kuburikidza nemavara ese munhu anofamba kuenda kutsika uye nyaya. Semuyenzaniso, Parisian Macarons haangori echirangaridzo chinonaka. Ivo zvakare vachiri kutora kukosha uye mweya weiyo French Renaissance mukukwana kwavo, inopenya uye yakanaka fomu.
saka, apo kuruma kushoma kunoita kuti chirangaridzo ichi chinyangarika, kuravira uye kunzwa kunoshamisa kunogara nesu nekusingaperi. Manzwiro edu anogara achifunga nguva yekutanga isu patakaedza Swiss chokoreti, uye ivo vanogamuchira chiyeuchidzo chako chinonaka vacharangarirawo. Kupfupisa, zviyeuchidzo zvinotapira chiyeuchidzo chakanakisa chekudzosa kubva parwendo kuenda kuEurope.
Zviyeuchidzo Kuti Uuye Kubva Kubva Rwendo: zvipfeko
Kutenga ndechimwe chezvakanakisa zvinhu zvekuita kunze kwenyika. Unogona kuchinja maitiro ako, wedzera chinhu chakakosha kuwadhiropu yako senge tsvarakadenga yechinyakare jira kubva kuRussia, bhachi reganda kubva kuItari, uye zvakawanda. Kana iwe uri kuronga kuunzira shamwari dzako chipfeko chekupfeka, ipapo iwe unofanirwa kuziva maitiro avo uye saizi hongu.
zvisinei, kune akawanda ezvipfeko zviyeuchidzo zvekusarudza kubva muEurope, izvo hazvirevi kusarudza saizi. Berlin yakakwana kune kutengesa mazambiringa, T-shirts kubva kumisika yemigwagwa yeLondon, tayi inotonhorera kubva kuParis kana kuItari, ingori mishoma zvipfeko zviyeuchidzo mazano ekuunza kubva kutenderera pasirese.
Iwo Cliche Zviyeuchidzo Zvekuunza Kubva KuRwendo KuEurope
Iwe haumbofa wakakanganisa nezviyeuchidzo zvekare. Semuyenzaniso, chipo shamwari uye mhuri yeEiffel Tower keychain, Russian matanda Matryoshka, kana mavhagi emapuranga kubva kuAmsterdam, izvi zvichave zvinofadza uye zvine musoro chiyeuchidzo. Uyezve, iwe unogona kutenga izvi zvekare zveEuropean zviyeuchidzo kunhandare yendege, kana chiteshi chechitima, paminiti yekupedzisira. zvisinei, funga nezve izvo zviyeuchidzo’ mutengo unenge wakakwira zvakanyanya kuchiteshi chechitima chezvitima, kupfuura muguta.
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga rwendo rusingakanganwiki muEurope. Unogona kufamba nyore nechitima kune chero nzvimbo muEurope, shopu uye unakirwe nekufamba nyore zvichaita masutukesi azere nehupfumi uye zviyeuchidzo.
Unoda here kupinza yedu blog positi "Ndezvipi Zviyeuchidzo Zvekuunza Kubva kuRwendo?”Pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fsouvenirs-bring-trip%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Rovedza Kufamba Belgium, Chitima Kufamba China, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel Holland, Rovedza Kufamba Italia, Train Travel The Netherlands, Travel Europe